Akwụkwọ 4 kacha mma ịchọta ọrụ ma nwee ihe ịga nke ọma | ECommerce ozi ọma
Encarni Arcoya | | Eziokwu na akụkọ
Ọrụ bụ ihe na, mgbe ị ruru afọ ole na ole, na-enye gị nsogbu. Na otutu. Ya mere, ịchọta ọrụ na-aghọ odyssey, karịsịa na-eburu n'uche oge nsogbu nke e nweela ma mee ka ọtụtụ ndị ọkachamara na ọrụ dị iche iche, nwee ike ịhọrọ ọrụ dị iche iche. Teknụzụ ndị ọhụrụ enwetakwala uru na ọ bụ na a chọghịzi ọrụ naanị na mpaghara ebe ị bi, kama ọ bụ Ibe ọrụ iji chọta ọnọdụ ahụ dị mma.
Ọ bụrụ n’ị nọ n’etiti ịchọ ọrụ ma ị maghịkwa ebe ị ga-ele anya, lee, anyị ga-enye gị ọtụtụ peeji iji chọọ ọrụ ebe a na-enweta nsonaazụ dị mma. Site na ịnwa ị gaghị efufu ihe ọ bụla, ma ọ dịkarịa ala n'ụzọ ahụ, ị ​​na-eji oge n'efu ị nwere n'ịchọta ọrụ ndị ọzọ nwere ike ịmasị gị.
1 Kedu ihe ị ga-ebu n'uche tupu ị chọọ ọrụ na ibe ọrụ
2 Job peeji iji chọta ọrụ
2.2 Ozi nkowa
Kedu ihe ị ga-ebu n'uche tupu ị chọọ ọrụ na ibe ọrụ
Ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ, otu n'ime ngwaọrụ ị nwere na aka mgbe niile bụ, na-enweghị obi abụọ, mmalite gị. N'ime ya ị nwere ike ịhụ nchịkọta nke ndụ ọrụ gị, yana ọzụzụ na ahụmịhe ị nwere. Nke a bụ akwụkwọ na-emepe ụzọ maka ụlọ ọrụ. Ọ bụrụ na ị nwere ike ime ka ọ maa mma nke ga-akpọ gị, ị nwetala nnukwu ego.
Ya mere, pattentionaa ntị na imewe nke malitegharịa Nakwa data niile ị nyere, nke metụtara ọrụ ịchọrọ, ọ bụ iwu.
Na ibe ọrụ ị ga-eziga ya na ịntanetị, nke na-eme ka anyị kwado ka ị nwee ya na kọmputa gị, ma ọ bụ na mkpanaka gị, n'ụdị PDF. Gịnị kpatara na PDF? Ọ dị mma, n'ihi na ọ bụ usoro na-enye ya ọdịdị dị mma ma na-ebipụta. Ọ bụrụ na iziga ya na doc, naanị ihe ị ga-eme bụ na ha ga-emepe ya mana ha agaghị ahụ ya. Na ihe anyi choro bu ya.
Anyị na-akwado ka ị debe lisi akwukwo na omumu nile diri gi. N'ọtụtụ peeji ọrụ, ha na-enye gị ohere ịmepụta profaịlụ ma ka mma karịa mmeju ahụ, ka mma ị ga-enye. Ihe mere anyi ji agwa gi banyere aha bu nihi na inwere ike itinye ha nile, onu ogugu oge, ihe omumu nke imuta, nkwubi okwu, wdg. Nke ahụ bụ, akwụsịla itinye aha usoro ihe ọmụmụ na afọ. Chọọ inyekwu ozi.
Ikwesiri ime otu ihe ahụ na ahụmịhe, metụtara ọrụ ọ bụla na ihe ị rụzuru na ya, ihe ị mụtara na ọrụ ị rụworo.
Job peeji iji chọta ọrụ
Ugbu a na ị nwere ihe niile ejikere, oge eruola ịkwado usoro ibe agaghị abụ abali, mana ọ ga - enyere gị aka ịchọta ọrụ. N'ezie, dị ka ọ na-eme ebe niile, ị ga-amarịrị etu esi enyocha n'etiti ndị dị adị na ndị na-abụghị, ka ị ghara igbu oge na ndị nke abụọ a.
Ọ bụrụ na ihe ị chọrọ amasị gị, gbalịa dee akwụkwọ edemede maka ọrụ ahụ ozugbo enwere ike. Ya mere, ha ga-ahụ na ị nwere mmasị n'ezie. Na ngwa ngwa ị nabatara onyinye ahụ, ị ​​ga-enwekwu ohere ị ga-enwe n'ihi na onye na-ewe iwe ga-ahụ mmalite gị ngwa ngwa ma enwere ike ịhọrọ gị maka ajụjụ ọnụ.
Nke ahụ kwuru, peeji nke anyị na-akwado bụ:
Linkedln bụ netwọkụ mmekọrịta, mana ọ dị iche na ndị ọzọ na ọ bụ ọkachamara. Kedu ihe ọ pụtara? Ọfọn, anyị malitere n'ihi na profaịlụ ị nwere dị ka mbido (yabụ ihe anyị gwara gị tupu ịnwe data niile n'aka).
Ọzọkwa, posts ndị a ga-etinye abụghị nke onwe, mana ọ bụ ọkachamara.
Nwere a - akụkụ pụrụ iche ịchọ ọrụ, site na njin ọchụchọ nke na-enye gị ohere ịnweta onyinye dị iche iche dabere na ihe ị na-achọ. Ekere ọtụtụ n'ime ha na netwọkụ mmekọrịta n'onwe ya, yabụ site na ịpị bọtịnụ arịrịọ ị nwere ike itinye usoro ọmụmụ ahụ ma tinye nọmba ekwentị gị ka ha wee kpọọ gị.
Gịnị mere anyị ji akwado ya? N'ihi na ọ bụghị naanị na ị nwere nhọrọ ahụ; Ọzọkwa, site na ndị ana-akpọ, ị nwere ike ịrịọ ha ka ha kekọrịta akwụkwọ gị yana, site na nke a, mee ka ọtụtụ mmadụ mara gị. N'ụzọ ahụ, ị ​​ga - enwe ike ịme ka profaịlụ gị na - agagharị ma na - erute ndị ziri ezi.
Portal ọrụ a bụ otu n’ime ihe kacha mara amara, nke bụ eziokwu bụ na anyị anwalela ya, yabụ anyị maara ntakịrị ihe anyị ga-akwado gị.
Dị ka ọ dị na LinkedIn, ị ga-eme ya wepụta oge iji mezue profaịlụ gị nke ọma na, ozigbo, ị nwere ike ịdebanye aha maka onyinye ị na-ahụ.
Ọtụtụ n'ime ha na-ajụ gị maka akwụkwọ ozi mkpuchi ma ọ bụ gafee ọtụtụ ajụjụ na-eji nzacha, mana ị nwere ike debanye aha na-enweghị nsogbu. Ugbu a, ọ na-arụ ọrụ nke ọma? Ee na mba. Na mbu, ọ bụ ihe zuru ebe niile na, ọ bụrụ na ị gafere nzacha ahụ, a ga-akpọ gị maka ajụjụ ọnụ, mana ọ bụghị n'ọrụ niile.
Ọ bụ ihe dị mma na ị debanyere aha maka ọtụtụ n'ime ha ma ha anaghị enwe ọganihu, mana ihe dị mma bụ na profaịlụ gị na-emekwa ihe mara mma, n'ihi na ndị were gị n'ọrụ nwere ike ịme nyocha na ị pụtara n'ime ha, n'ụzọ nke ọ bụghị naanị na-arụsi ọrụ ike search, kamakwa n'ezinụlọ.
Ọ bụ otu n'ime ibe ọrụ ebe ị ga-ahụkwu onyinye ọrụ. N'ezie, ha abụghị onyinye niile a na-etinye na ọnụ ụzọ ahụ, mana ọ na-arụ ọrụ dị ka igwe metasearch, ya bụ, na ndepụta ọrụ na-enye ma nke ya ma ibe ya. Nke ahụ na - azọpụta gị oge, n'ihi na ị ga - ahụ ọtụtụ onyinye karịa na saịtị ndị ọzọ.
Also nwekwara ohere iji bulite mmalite gị, ihe dị ezigbo mkpa, wee si otú a jide n'aka na, ọ bụrụ na ha achọọ gị, ha nwere ozi niile ha chọrọ iji kwenye ha na ị bụ ezigbo nwa akwukwo.
Nke a sitere na ibe ọrụ ebe ị nwere ike chọta onyinye mba ofesi. N'ezie, enwere ọtụtụ ebe a site na mpụga Spain karịa Spain. Mana ọ bụ ohere ma ọ bụrụ na ịchọrọ inweta ọrụ na mba ọzọ.
N'ezie, anyị na-akwado na, mgbe ị na-etinye mbido gị, ma ọ bụ zipu ya, ị na-eme ya na Bekee (na ị maraworị na enwere ndebiri mba ụwa ị ga-agbaso n'ihi na ọ dị n'otu).
Enwere ọtụtụ ibe ọrụ, ị nwere ike ịgwa anyị nke rụụrụ gị ọrụ?
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Eziokwu na akụkọ » Akwụkwọ 4 kacha mma ịchọ ọrụ